နောင်ဂျိန်တို့ မိသားစု: သမီးလေးရဲ့ တိုးတက်မှု ၂
သမီးလေး... ၄ လပြည့်တဲ့နေ့မှာပဲ သမီးဟာ တော်တော်လေး သိလာတယ် သူဘာလုပ်ချင်တယ် ဘာလိုချင်တယ်ကို ငိုပြတဲ့အလုပ်ဟာ ပိုပီပြင်လာတယ်။ အသံထွက်ပီး ရီတတ်လာတယ်...
သမီးလေးစိတ်ကြည်နေချိန်ဆို မေမေက အာဘွားဆို ပီး ပါးထိုးပေးလိုက်ရင် သူ့ပါးစပ်ကိုဟပီး နမ်းတော့တာပဲ။ မေမေက သမီးလေးကိုလည်း အာဘွားပေးမယ်ဆို .. တရှုပ်ရှုပ်နမ်းလိုက်တာနဲ့ ဟက်ဟက် ဆိုပီး ရီတော့တာပဲ..။
သမီးလေးက နို့ဗူးကိုင်တတ်ပေမဲ့ ပါးစပ်ပေါက်လွဲချော်နေတတ်တာ.. မအေက ပြင်ပေးလည်းမကြိုက်ဘူး။ သူ့ဘာသာ လက်၂ဖက်နဲ့ကိုင်ပီး စို့နိုင်ရင် မေမေ့ကို ပြုံးပီးကြည့်တဲ့အကြည့်လေးက ဒီမှာတွေ့လား သမီးကိုင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အပြုံးလေးပေါ့။
အဲဒီလို သမီးပြုံးတဲ့အပြုံးတွေမှာ မေမေ့ကို ကိုင်အလှုပ်ဆုံးက မွေးစမှာ သမီးကိုချော့သိပ်နေတဲ့မေမေ့ကို သမီးက ပြုံးပြတဲ့အပြုံးပဲ။ အဲ့ဒီအပြုံးက အားလုံးကို တွေ့လား.. ငါ့အမေ ငါ့ကိုပွေ့ထားတယ်လို့ ဂုဏ်ယူနေတဲ့အပြုံး ကျေနပ်နေတဲ့အပြုံးပေါ့...။
သမီးက မှောက်ထားရင် သိပ်မကြိုက်ချင်ဘူး။ ဘာလို့ဆို မှောက်ပီး သူ့ဟာသူ ရှေ့မတိုးနိုင်လို့။ ဒါပေမဲ့ သမီးက လမ်းလျှောက်ပီး သူ့အရုပ်တွေဆီ သွားချင်တယ်။ မေမေက သိပ်ငယ်သေးတော့ ဒါတော့ ပေးမလုပ်ချင်ဘူးလေ.. တခါတလေပဲ လုပ်ပေးတယ်။
အဲဒီလိုပဲ သမီးလေးကို လှဲထားပီး မေမေက ၀မ်းတူး သရီးလို့အော်လိုက်တာနဲ့ သရီးဆို ကုန်းထထိုင်ပီးထဖို့ကြိုးစားတော့တာပဲ။ ရီလဲရီရတယ်။ သူ့အားနဲ့တော့ မထနိုင်သေးပေမဲ့ မေမေ့လက်ညှိုး၂ဖက်ကို ဆွဲယူအားပြုပီးထတာ။ အဲဒါ တနေ့ကို ၃ခါလောက်တော့ မေမေလုပ်ပေးရတယ်။ လုပ်မပေးရင် အော်တာကိုး။
သမီးက သူအလိုမကျရင်အာခေါင်ခြစ်ပီးအော်ချင်လာပီ။ မအေလို ခပ်ဆိုးဆိုးများလားမသိ။ အိပ်ချင်တဲ့အခါဆို ဖအေလဲမရဘူး။ မအေမှမအေပဲ။ လူလည်ကလဲကျမှကျ။ အိပ်နေရင်းနဲ့ မျက်လုံးလေးဖွင့်ကြည့်လို့ လူမတွေ့လဲ အော်ရတာနဲ့..။ အိပ်သွားလို့ လက်ပေါ်ကချလဲ သိပ်လည်တာပဲ တော်၂နဲ့ချမရဘူး။ လူလည်မ။
သမီးကို မြူပီဆို အခုဆို အသံထွက်ပီး ရီတတ်လာပီ။ သူတခုခုလိုချင်ပီဆို ပြုံးပြတဲ့အခါ အဖေအမေ အသည်းသိပ်ယားတာပဲ။ သူ့အဖေကဆို ရွှေရင်အေးတဲ့။ သမီးလေးအပြုံးလေးမြင်ရင် ပင်ပန်းသမျှ အမောပြေသတဲ့..သမီးလေးရဲ့။
မေမေက သမီးလေးကို အိမ်မှာ မြန်မာလိုနဲ့ အင်္ဂလိပ်လိုပြောပေးတယ်။ ဂျပန်လိုတော့ ကျောင်းမှာ သင်ပေးလိမ့်မယ်။ သမီးက တီဗွီကို တအားကြည့်လွန်းလို့ မအေကိုယ်တိုင် မကြည့်ပဲ ပိတ်ပစ်ရတယ်။ အမှန်က သမီးက တီဗွီကမြင်ရတဲ့ သူတွေကို စကားလှမ်းပြောတာ ဒီနေ့မှ သိတော့တယ်..။
NSA December 19, 2013 at 10:41 PM
ကလေးရဲ့တိုးတက်မှုလေးတွေ လစဉ် အသေးစိတ်ရေးထားနိုင်တာ ကောင်းလိုက်တာ..။
တန်ခူး December 26, 2013 at 9:22 PM
မေချစ်သမီးလေး. မေမေ့ က ချစ်လိုက်တာ တုန်လို့ နော်. သမီးလေးကလဲ ချစ်စရာကောင်းလွန်းတာကို